Dadaaladda Beesha Caalamka ee doorashooyinka dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Dadaaladda Beesha Caalamka ee doorashooyinka dalka
Wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa wada dadaaladii ugu danbeeyay oo la doonayo in Madaxda Maamullada la is hor fariiso mar kale, kadib fashil ku yimid wadahadallo u socday muddo Saddex Maalin ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dadaallo xooggan oo ay hor kacaan Safiirka Mareykanka iyo Wakiilka gaarka ah ee Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, Yamamoto iyo James Swan, ayaa maanta ilaa caawa ka socda Magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu doonayo isku keenidda mar kale Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa doonaya markaan in ay qaataan door isku keenid, waxa ayna qoorsheeyeen in maalinta Sabtiga, kulan aan rasmi ahayn isugu keenaan Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada.
Dowladaha Ingiriiska iyo Norway, ayaa si xooggan u biritaaraya Safiirka Mareykanka iyo Wakiilka gaarka ah ee Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, waxaana si cad loogu sheegay Hoggaamiyayaasha Maamullada in ay qasab tahay in Sabtiga la isla meel dhigo Ajandaha shir madaxeedka, si hore loogu sii socdo.
Waxaan hir galin qorshe labaad “Plan B”, oo wakiillada Beesha Caalamka dajiyeen in la dhaqan galiyo Isniintii la soo dhaafay haddi Madaxda Soomaalidu heshii waayaan, waxaana dib u dhigidda aarintaan door weyn ka ciyaaray kulamadii u socday Maamullada maalmahaas iyo Golaha Midowga Murashixiinta oo qudhoodu ka soo dabcay go’aankoodii hore.
Hadda, Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in Beesha Caalamka ay qaraar adag soo saari doonto Isniinta soo socota, haddii uu fashilmo kulanka ay Sabtiga qorsheeyeen.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo iyo Xukuumadda xil gaarsiinta ayaa ku fashilmay in ay dalka ka hirgaliyaan qabashada doorasho la isla ogol yahay oo waafaqsan heshiiski 17-kii September 2020 iyo soo jeedintii Guddigii Baydhabo ku shiray 16-kii Febaraayo 2021.